Ra’iisul Wasaare Khayre oo wado qorahe halis ku ah shirkadaha qaar ee bixiya adeega sarifka lacagaha ee Forex. | XAL DOON
Home NEWS Ra’iisul Wasaare Khayre oo wado qorahe halis ku ah shirkadaha qaar ee...
Ra’iisul Wasaare Khayre oo wado qorahe halis ku ah shirkadaha qaar ee bixiya adeega sarifka lacagaha ee Forex.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Xafiiska Raysulwasaaraha dalka Xasan Cali Khayre uu shaqadiisii maalmahaan u weeciyey suuqa sarrifka lacagaha qalaad ee loo yaqaan FOREX.
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ah mudane ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in madaxda sare qaarkood ay shirko la noqdeen qaar kamid ah shirkadaga ka shaqeeya sarifka lacagaha Online-ka ee Forex loo yaqaano.
“Xogo muhiim ah oo soo baxaya ayaa tilmaamaya In qaar ka mid ah madaxda dawladda federaalku ay qaar shirkadaha FOREX ka mid ah shirko la noqdeen, tani ma ahan wax ceeb ah balse waxaa ceeb noqon doona marka uu hirgalo qorshe xafiiska RW Khayre ka socdo” ayuu yiri Xildhibaanka.
Waxa uu hadalkiisa sii raaciyay iney nasiib daro weyn noqon doonto marka uu hirgalo qorshaha uu wado xafiiska Khayre ee lagu doonayo in sharciyada shaqo ee Forex la siiyo oo kaliya shirkadaha ay iyaga wax ku darsadeen, halka kuwa kalena la doonayo in meesha laga saaro.
“Qorshahaas ayaa ah In golaha wasiirada la marsado xeerar lagu naas-nuujinayo shirkadaha FOREX qaarkood ay wax ku leeyihiin (shareholders ka yihiin) madaxda Villa Somalia qaarkood, kuwaasoo waraaqaha ogolaanshaha shaqo kaligood siin doona shirkadaha ay wax ku leeyihiin kuwa kale ee tartanka kula jirana ayadoo si xun loo adeegsanayo magaca dawladnimada la rabo in meesha laga saaro”.
Xildhibaan Fiqi oo kamid ah mucaaradka ugu weyn ee dowladda ayaa hadalkiisa ku soo xiray “Horey bankiga dhexe ayaa waraaqo aan laga fiirsan oo lagu mamnuucayo FOREX soo saaray, haddana xeer gole wasiirro dan gaar ah laga leeyahay oo aan socon doonin sidii kii hore oo kale ayaan sugaynaa maalmaha soo socda”.